आज पनि अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर, अन्य देशको कति ? (हेर्नुस पुरा विवरण) -
Homeअर्थ/वाणिज्यआज पनि अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर, अन्य देशको कति ? (हेर्नुस पुरा विवरण)
December 3, 2018 Spnews अर्थ/वाणिज्य, समाचार 0
नेपाली बजारमा आज (सोमबार) अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर छ। शुक्रबारको तुलनामा शनिबार ५० पैसाले घटेको अमेरिकी डलरको भाउ आइतबार र सोमबार भने स्थिर रहेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैँकले तोकेको विनिमयदर अनुसार आज अमेरिकी डरलको खरिददर मूल्य १ सय ११ रुपैयाँ ५ पैसा छ भने विक्रिदर मूल्य १ सय ११ रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै एक मलेसियन रिंगिटको खरिददर मूल्य २६ रुपैयाँ ५४ पैसा छ भने बिक्रिदर २६ रुपैयाँ ६८ पैसा छ। त्यस्तै आज यूके पाण्डको खरिददर १४१ रुपैयाँ ७० पैसा छ भने बिक्रिदर १४२ रुपैयाँ ४६ पैसा छ।
एक साउदी रियालको खरिददर २९ रुपैयाँ ६० पैसा छ भने बिक्रिदर २९ रुपैयाँ ७६ पैसा छ। त्यस्तै, एक कतारी रियाल खरिददर ३० रुपैयाँ ५० पैसा र विक्रिदर ३० रुपैयाँ ६६ पैसा रहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य देशको विनिमय दर यस्तो छ ।
अन्य देशको कति ? (हेर्नुस पुरा विवरण)
आज पनि अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर
यस्ती थिइन् निर्मला पन्त, बाहिरियो निर्मलाको जिवित अवस्थाको भिडियो !